Tababare Solskjær oo si weyn ugu amaanay difaacyadiisa guushii ay ka gaareen kooxda Tottenham – Gool FM
(Premier league) 14 Jan 2019. Tababaraha kooxd Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa u muuqday mid aad ugu faraxsan guushii adkayd ee aadka u weeneyd ay kooxda Tottenham Hotspur kaga gaareen garoonka Wembley.
Man united ayaa gaartay guushii shanaad xariir ah ee horyaalka Premier league kaddib markii ay 1-0 uga adkaadeen kooxda Tottenham Hotspur.
Hadaba tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa kadib marka uu kulanka soo idlaaday wuxuu ka hadlay dareenkiisa sida uu ugu faraxsan yahay guushan ay ka gaareen Spurs-ka.
“Kama dhigna kulanka maanta mid muujineysa inaan sii ahaanayo macalinka kooxda Manchester United, waan garanayaa sababta aan halkan kusii joogi karo, iyo shaqada la iga doonayo inaan qabto inta aan halkan joogo”.
“Waxaan sameenayaa shaqada ugu fiican ee aan qaban karo, maantana waxaan gaarnay guul muhiim ah”.
“Waanu u difaacnay si wanaagsan koox ahaan, marka aad la kulantid Harry Kane waad ogtahay inaad imtixaan adag ku jireyso, maanta waxaan heysanay difaac aad u xoogan”.
“Waxaan u ciyaarnay qaabkan, sababtoo ah waxay ahayd tababarkii aan isbuucan sameenay, waxaan geesaha garoonka kala dhignay xidigaha Martial iyo Rashford, halka Jesse Lingard uu ahaa isku xiraha ciyaarta, waxaan qabaa inaan maanta guuleysanay”.
Lionel Messi oo TAARIIKH aan cidi uga horreyn ka dhigay La Liga balse weli waxaa ka horreeya Cristiano Ronaldo.....(Sidee?)